Maxay dadka u qeyliyaan markay careysan yihiin? - Ceelhuur Online
Home > Arimaha Bulshada > Maxay dadka u qeyliyaan markay careysan yihiin?
January 21, 2017 admin619
Xanaaqa: Maxay dadka u qeyliyaan markay careysan yihiin?
Markaad carooto samee marka koowaad sidi Rasuulkeena suubanaa SCW noo sheegay, “Haddii qofku caroodo ha yiraahdo: “Acuudu Billaahi, Caradiisu way baaba’aysaa”
Xadiis kale Rasuulku SCW wuxuu yiri, “Haddii mid idinka mid ah xanaaqo, ha aamuso.”
Xigasho: Farah Cawaash